Waa Maxay Noocyada Badbaadinta SEO-ga ah?
Ka hor intaanan bilawnayn sida ay u shaqeyneyso SEO-ga, ma aynu ku qeexnaa waxa xun ee SEO ah.
Nooca Sixirka SEO
Si fudud u dhigo, SEO-ga diidmo ah waa arrin ka mid ah dhaqdhaqaaqyada qarsoodiga ah ee loogu talagalay hoos u dhigista qiimeyntaada natiijooyinka raadinta. Isku-daygan xun ee laga soo horjeedo boggaaga ayaa badanaa ka baxsan, taas oo micnaheedu yahay dhismaha isku-xirnayaasha aan toosnayn ee boggaaga ama dib-u-dajinta boggaaga.
Inkastoo inkastoo negative negative SEO aysan ahayn sababta ugu badan ee dhibcaha si lama filaan ah uga dhicin, waxay kuu fiicantahay inaad ogaatid sida loo qeexo haddii qof uu waxyeelo u geysto heerarkaaga.
Negative off-page SEO waxaa loola jeedaa SEO ah bartilmaameedsanaya website-kaaga oo aan gudaha fara-galin. Halkaan waxaa ku qoran liiska ugu caansan ee bogga SEO-ga ee xun:
Waxaa jira fursad yar oo ah in labada isku-xirmo ee spamka ay dhaawici doonaan qiimeynta goobta. Si kastaba ha noqotee, marka ay timaado xiriirinta beeraha, markaa suurtagalnimada weerarka ayaa ah mid aad u sarreeya.
Sida caadiga ah, intooda badan baayacmushtarradaasi waxay isticmaalaan qoraal isku mid ah. Kursiyadaha isbarbardhiga ah waxaa laga yaabaa inaysan ku xirnayn bogga intarnetka ee weerarka ama ay ku jiraan bartilmaameedka muhiimka ah si ay u sameeyaan xiriirka khayraadka ee u eg sida milkiiluhu u shaqeynayo.
Si looga hortago noocan oo kale ah, si joogta ah u fiiri kobaca xiriirkaaga.
Qalabka SEO SpyGlass wuxuu kaa caawin karaa tan tan iyo markii uu kuusoo bandhigayo garaafyada horumarka labadaba:
Tirada tixraacyada domainka;
Tirada xiriirada ee profile.
Nooc aan caadi aheyn mid ka mid ah labadan xaaladood ayaa sabab u ah in ay eegaan xidhiidhada aad dhawaan heshay.
Habab kale oo tartamayaasha ah ayaa jebin kara darajooyinkaaga waa iyada oo la raadinayo iyo nuqul ka bixinaya macluumaadkaaga shabakadaha kale. Tani waxay u shaqeysaa sida soo socota: marka mashiinka raadinta uu helo mawduucyo isku mid ah oo ku yaal shabakado kala duwan, waxa uu soo saaraa kaliya hal version si loo darajeeyo. Inkasta oo makiinadaha searchers si dhakhso ah u aqoonsadaan sawirka asalka ah, had iyo jeer waa meel qolka laga reebo.
Haddii aad rabto in aad hubiso in macluumaadkaaga aan lagu duubin goobaha kale, markaa si fiican ayaad u hubineysaa si joogto ah qalabka Copyscape kaas oo si fiican u go'aaminaya dhacdooyinka nuxurka qoraalka. Haddii ay dhacdo in aad hesho nuqulo koobi ah ee aad ka kooban tahay, la xiriir webmaster oo weydii inuu ka saaro gabal.
Negative on-bog SEO ah ku lug leh jabinta galay website-kaaga iyo bedelay agagaarka agagaarka. Waxaa jira hab aad u adag in la hirgeliyo marka loo eego weerarada SEO-off-bog. Khatarta ugu weyn ee SEO-ga ah ee weerarka hackerku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah:
Wax ka bedelka Mawduuca
. Caadi ahaan, khaniisiinta ayaa ku daraya nuxurkiisa spammy ee goobta. Maaddaama xidhiidhadaasi ay badanaa qarsoon yihiin, ma arki doontid ilaa aad ka fiirsato lambarka.
Mid ka mid ah dhacdooyinka xun ee suurtogalka ah ee SEO-ga waa marka qofka weerarka gareeyo boggagaaga, isaga oo u diraya boggiisa. Qaar ka mid ah milkiilayaasha goobta waxay isticmaalaan habkan si ay u kordhiyaan bogooda shabakadooda ee 'PageRank' ama 'user to the site' si ay u galaan marka ay isku dayayaan inay. Haddii mashiinnada raadinta ay ogaadaan qadarin ka hor intaadan sameynin, waxay u badan tahay inay ciqaabi doonaan khayraadkaaga si loogu soo celiyo bogga xaasidnimo. Hantida goobta joogtada ah ee xisaabeed sida xal raadiye sida "WebSite Auditor" waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu ogaado weerarradan.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto, laakiin isbeddel yar oo faylasha sida robot. Qaadku wuxuu lumi karaa istiraatiijiyada suuq-geynta ee dhamaan SEO-ga. Xeerka Naafonimada ayaa ah wax kasta oo ay qaadato si aad u sheegto mashiinka raadinta si aad u ilowsiiso kheyraadkiina. Sad, laakiin run ah.
Nasiib wanaag, waxaa jira wax aad sameyn kartid si aad uga hortagto dhaqankaas. Jeegaga darajo joogta ah ayaa kaa caawin doona inaad noqotid kan ugu horeeya si aad u ogaatid haddii ilahaagu helikarsho. Rank Tracker waa qalab weyn oo aad codsan karto jadwalka tooska ah. Waqti xaadirkaaga goobtaada si lama filaan ah uga soo baxo natiijooyinka Google, waxaad arki doontaa xusuusta la tuuray ee qaybta kala duwanaanshaha. Waa sida fudud Source .